mercredi, 08 septembre 2021 11:55
Ady amin'ny piraty : Boky sy kapila mangirana hosoka aman'analiny isa no indray nodorana
Kapila mangirana hosoka 54 650 isa, niampy boky hosoka 105, ka 80 malagasy ary 25 vahiny, no nodorana teny Ambohitrimanjaka ny alatsinainy 06 septambra 2021. Vokatra azon’ny Brigade Anti-piratage (BAP) teo anelanelan’ny Aprily 2021 hatramin'ny Aogositra 2021 ireo. Olona 47 no voasambotra nandritra izay dimy volana izay, ary efa natolotra ny Fitsarana. Araka ny fanazavan-dRandrianandrasana Manitrala, Chef des opérations eo anivon'ny BAP, dia voararan'ny lalàna ihany koa ireny fampidirana hira eny amoron-dalana ireny. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 03 septembre 2021 19:44
Asa fanaovan-gazety : Nodimandry i Dany Be
Lavo ny andrarezina ! Nodimandry omaly teo amin'ny faha-86 taonany ny mpanao gazety zokiolona Rakotoseheno Daniel na Dany Be. Paka sary no tena nahalalana azy. Nitety vanim-potoana, ary mirakitra tantara maro ny sanganasa sy tahiri-tsary nananany. Efa notsaboina naharitraritra izy. Tao amin'ny HJRA Ampefiloha, hopitaly nitsaboana azy farany i Dany Be no lavo. (Jereo Sary Tohiny)
Sarimihetsika Malagasy : Kapila hosoka maherin'ny 64 000 no tratra tao anatin’ny enim-bolana
Kapila hosoka maherin'ny 64 000 no tratran'ny Brigade Anti-Piratage (BAP) eo anivon'ny Ministeran'ny serasera sy ny Kolontsaina ny volana janoary ka hatramin'ny volana jona 2021 lasa teo, ary efa nodorana ny 24 martsa ny ampahany. Ny 50 000 mahery dia ho dorana amin'ity volana ity raha ny fanazavan'ny BAP. Manoloana ny antso avo ataon'ireo mpisehatra amin'ny sary mihetsika dia nanambara ny mpandrindra ny BAP Rarivomanantsoa Eddy fa amin'ny maha mpanao famotorana na Officier de police judiciaire azy dia mifarana hatreo amin'ny fanolorana ireo olona tratra eo anivon'ny fitsarana ny asany, fa tsy afaka hitsabaka amin'izay fanapahan-kevitra raisin’ny Fitsarana aorian’ny fandalovana Fampanoavana.
lundi, 30 août 2021 08:30
Sarimihetsika malagasy : Mitaraina ireo mpamokatra sy mpilalao
Nihaona tamin'ny mpanao gazety tetsy Andohan'i Mandroseza, Antananarivo ny alahady 29 aogositra ireo mpamokatra sy mpilalao Sarimihetsika malagasy, nitaraina sy naneho ny alahelon'izy ireo manoloana ny afitsoky ny piraty, mambotry sy manimba ny fihariana ary ny fiveloman'izy ireo. Misy mpanao piraty gaigilahy, efa imbetsaka no tratra, nefa votsotra hatrany eny amin'ny Fitsarana hoy i Rajao Tsarafara. Hiakatra Fitsarana indray olona io amin'ny faran'ny volana septambra ho avy ka dia manaitra ny fanjakana sy ny Fitsarana izy ireo ny amin'izany. Nambaran'izy ireo fa manao ny asany amin'ny ady amin'ny hosoka na piraty nefa kely tetibola iasana ny BAP (Brigade Anti-Piratage), ka niantso ny hanampian'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina io rafitra io izy ireo. Nanao akanjo miloko mainty ireo mpamokatra sy mpilalao sarimihetsika tonga maro tamin'io fotoana io nanehoan'izy ireo ny fitakiana, fitarainana sy alahelon'izy ireo izany. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 21 août 2021 18:44
Foibe FJKM : Voafidy ho Filoha i Docteur IRAKO Andriamahazosoa Ammi, Mpitandrina
Voafidy nandritra ny synoda lehibe faha-19 natao tao Sambava ny birao mpiandraikitra foibe FJKM hitondra mandritra ny efa-taona manaraka. -Pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa no lany ho filohan’ny FJKM indray. - Filoha : IRAKO Andriamahazosoa Ammi - Filoha Mpanampy Mpitandrina : Andriamampianina Zaka- Filoha Mpanampy Laika : Razarasoa Timoty- Mpitahiry vola : Randrianja Voahangy - Mpanolotsaina Mpitandrina : Rakotobe Rajaomanjato- Mpanolotsaina Laika : Andriamamonjisoa Georges Henri (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 05 août 2021 09:52
Tarika Mahaleo : Nodimandry i Charle
Nodimandry androany maraina i Andrianaivo Charle Bert na Charle, iray tamin'ireo mpamorona ny Tarika Mahaleo. Mpively aponga maroanaka tao amin'ny tarika izy, mpandinika fiaraha-monina no mpanao gazety ihany koa. Notoloran'ny fanjakana ny mariboninahi-pirenena ambony indrindra Grand-Croix de 2ème Classe de l'Ordre National Malagasy vao tsy ela akory izay ireo mpikambana ao amin'ny tarika Mahaleo, anisany i Charle sy Jean Bà zokiny. Ity farany vao nodimandry amam-bolana izay, dia izao lasa izao i Charle zandriny. 67 taona izy izao lavo izao. (Jereo Sary Tohiny)
Mankalaza ny AÏD BE na Aïd al-Adha na koà Aīd al-Kabīr ny mpino silamo androany Talata 20 Jolay, andro tsy fiasana nefa andraisan-karama eto Madagasikara. Ny "FETIN'NY SORONA" dia fety silamo anisan'ny manan-danja indrindra. Fahatsiarovana ny nitsapan'Andriamanitra an'i IBRAHIM (Abrahama amin'ny Kristianina) ka saika hanaovany sorona ny zanany ISMAÏL (ISAAKA amin'ny Kristianina). Fetin'ny finoana sy Fanantenana ary Fifankatiavana ka iarahana mifaly amin'ny fianakaviana sy olona akaiky ny AÏD BE. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 16 juillet 2021 12:39
Sampana Sekoly Alahady FJKM : Hahemotra amin’ny 2022 ny Fihaonambe any Mahajanga
Hahemotra amin’ny taona 2022 ny Fihaonamben’ny Sampana Sekoly Alahady FJKM nokasaina hatao any Mahajanga ny 9-13 septambra ho avy izao. Hampahafantarina amin’ny fotoana manaraka ny vanin’andro hanatanterahana izany. Izay no tapaka taorian’ny dinika nifanaovan’ny filoha synodaly sy ny Sampana Sekoly Alahady Boina Vaovao Mahajanga (SP 17), ary ny Biraon’ny Sampana Sekoly Alahady Foibe ny talata faha-13 jolay lasa teo. Noho ny fisian’ny tetiandrom-pampianarana vaovao navoakan’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena no nahatonga ny fiovan’ny lamina. Ny alarobia 1 septambra ho avy izao no voatondro fa hanombohan’ny taom-pianarana 2021-2022, araka ny tetiandro ofisialy. Balita Raharisoa
Mbola zaza nefa kely mahay sady matsilo saina i Laurent Simons. Teo amin’ny faha-8 taonany izy dia efa nahazo maripahaizana bakalôrea. 11 taona izy izao, ary manana mari-pahaizana mitovy lenta amin’ny « licence » amin’ny lalampiofanana fizika, ary hanomana “master” amin’ny taom-pianarana ho avy. Belza ny rainy ary avy any Pays Bas ny renin’i Simons. Voalaza fa tsy lavitra an’i Albert Einstein ny haranitan-tsainy. Ny hanamboatra taova artifisialy hahalava velona ny olombelona no nofinofiny ka hilofosany. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 05 juillet 2021 14:34
Astronomie : Le Sénégalais Maram Kaire a son nom gravé dans le ciel
En félicitant l’astronome sénégalais Maram Kaire, le président sénégalais Macky Sall dit sur les réseaux sociaux : "Le gouvernement sera à ses côtés dans la promotion de l’astronomie". Découvert en février 1998, l’astéroïde initialement numéroté (35462) 1998 DW23 devient officiellement (35462) Maramkaire, selon la Radio France Internationale ce vendredi soir. Président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (ASPA), le jeune scientifique, 42 ans, a son nom gravé pour cet astéroïde du système solaire. Il s’agit d’un objet sombre, invisible à l’œil nu, découvert en 1998 par l’astronome français Alain Maury."Il fait partie de la ceinture principale des corps célestes gravitant autour du Soleil, entre les planètes Mars et Jupiter, et effectue un tour complet du Soleil en 4,36 années terrestres", note la source. Selon toujours elle, Maram Kaire doit la "nomination" à l’initiative d’amis astronomes, astrophysiciens et planétologues avec lesquels il a mené à deux missions de la Nasa – l’agence spatiale américaine – au Sénégal, en 2018 puis en septembre 2020.